HomeArimaha QoyskaWaa Maxay Farqiga U Dhexeeya Jacaylka Dhabta Ah & Rabitaanka Galmada?
Jacaylka & Galmada:
Jacaylka 7 Galmada ayaa ah waxyaabaha ugu weyn ee ay Raggu daneeyaan waxana xusid mudan in ayna nolol farxad leh jirin hadii uuna jecayl dhex oolin labada qof ee is qaba.
Waxa jirta dad badan oo Is qaba oo noloshooshu kaliya ku xidhantahay rabitaankooda galmada taas oo keenta in ayna dareemin farxad iyaga oo kala saari waaya jacaylka iyo rabitaanka galmada gaar ahaan Ragga sidaas darteed waxa aan halkan kuugu soo bandhigi doonaa farqiga u dhexeeya jacaylka iyo rabitaanka Galmada si aad u kala saartid.
Xidhiidhka Ka dhexeeya Jacaylka & Galmada:
Fikradda Jacay ayaan lahayn macno kaliya laakiin waxa jirta qeexid badan oo lagu qeexi karo, laakiin jacaylka ayaa ah dareen uu qof u qabo qof kale iyo waliba muhiimada uu siinayo xidhiidhka uu la leeyahay qofka kale.
Laakiin waxa aan kala saari kartaa farqiga u dhexeeya jacaylka iyo Galmada iyada oo Galmadu kaliya ku koobantahay jidhka laakiin rabitaankaas ayaa loo badali karaa jacayl dhab ah laakiin waa in aad muddo dheer sugto si ay arintaas u dhacdo.
Waxa jirta xidhiidhyo badan oo ku fashilmay arintaas kadib markii ay kala saari kari waayeen jacaylka dhabta ah iyo Rabitaanka Galmada.
Farqiga u dhexeeya Jacaylak & Rabitaanka Galmada:
1.Fikradda: Jacaylka ayaa muujinaya in uu Ninku ku farxo gacalisadiisa ama ay Gabadhu ku faraxdo gacliyeheeda isla marka uu arko halka uu rabitaanka Galmadu tahay in uu qofku isla markiiba ka fikiro sidii uu u kicin lahaa dareenka qofka kale.
2.Wakhti Farxadeed: Marka labada qof ee is jecel ay wakhti fiican ku qaataan meel ka baxsan guriga waliba meelo kala duwan taas waxa ay cadayn u tahay jacaylka dhabta ah laakiin hadii ay kaliya sariirtu tahay dookha 1-aad ama meesha kaliya ee ay ku kulmaan waxa ay la macno tahay in uuna jacayl ka dhexayn laakiin kaliya jirto rabitaan dhanka galmada ah.
3.Dareenka: dareenka jacalka ee ka dhexeeya labada qof ayaa hor seedaya farxad ay labada qof helaan taas ayaana iman karta kaliya marka uu labada qof ka dhexeeyo jacayl dhab ah laakiin hadii waxa kaliya ee ay labada qof ka fikiraan tahay dhanka Galmada waxa ay cadayn u tahay in uuna jirin wax jacayl ah.
4.Tanaasulid: Hadii ay jirto tanaasulid badan oo ka dhexaysa labada qof ee is jecel waxa ay arintaas keenaysa farxad noloshooda ah laakiin arintaas ayaan dhici karin ilaa uu jacayl dhab ah ka dhexeeyo labada qof iyada oo cadayn u ah in uu kaliya labada qof ka dhexeeyo rabitaan dhanka Galmada ah.